राम कार्कीको बाचाः झापाका सडक अफ्रिकन सुन्दरीको गालाजस्तै बनाउँछु ! ‘विश्वप्रकाश भाइले गाउँमा घुमेर के गर्ने ? – Famous Nepal
10:26: PM Thursday October 18, 2018
राम कार्कीको बाचाः झापाका सडक अफ्रिकन सुन्दरीको गालाजस्तै बनाउँछु ! ‘विश्वप्रकाश भाइले गाउँमा घुमेर के गर्ने ?
Posted on November 16, 2017 at 12:00 pm by फ्यामोस नेपाल
३० कात्तिक, झापा । माओवादी नेता एवं झापा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार राम कार्कीले मजदुरहरुको तलब दोब्बर वृद्धि गर्ने र ग्राभेल सडकलाई ‘अफ्रिकन ब्यूटी’ को गालाजस्तै चिल्लो बनाउने बताएका छन् ।
‘तपाईंहरु हामीलाई भोट दिनुस् वामपन्थीको सरकार बनाउनुस्,’ कार्कीले भने, ‘पाँच वर्षको अवधिभित्र झापाका सबै सडक अफ्रिकन ब्यूटीको गालाजस्तै बनाइदिन्छौं । अफ्रिकामा जो सुन्दर मान्छेहरु हुन्छन् नि, तिनीहरुको जस्तो पोटिलो गाला !’
कार्कीले आफूले बोलेका कुरा ढुंगामा कुँदेका अक्षरजस्तै भएको भन्दै पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले भने- ‘हामीले बोलेका कुरा ढुंगामा लेखेको अक्षर जस्तै हो, ढाँट कुरा गर्दैनौं । कांग्रेसका नेता भन्छन् चियाको बोटमै जन्मिएको हुँ, तर म आमाले जन्माएको मान्छे हुँ, ५-६ महिना समय लाग्ला, तर बोलेको कुरा पूरा गर्छु ।’
‘विश्वप्रकाश भाइ’ ले गाउँमा घुमेर के गर्ने ?
माओवादी उम्मदेवार कार्कीले कांग्रेस उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मा अरु कांग्रेस नेताहरुभन्दा फरक रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । तर, चुनावपछि कम्युनिष्टको सरकार बन्ने भएकाले शर्माले चुनावमा गरेका बाचा पूरा नहुने ठोकुवा गरे ।
कार्कीले भने, ‘यहाँ विश्वप्रकाश भाइ उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ गाउँमा घुम्नुहुन्छ । अरु कांग्रेसभन्दा फरक हुनुहुन्छ । उहाँ भन्दै जानुहोला, यहाँ कल्भर्ट बनाउँछु, बाटो बनाउँछु । तर के गर्ने ? सरकार कम्युनिष्टको बन्छ । तल गाउँ घुमेर के गर्ने ?’
चिया बगानका मजदुरको तलब दोब्बर पार्ने
झापा १ ज्यामिरगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई बिहीबार बिहान सम्वोधन गर्दै कार्कीले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले तोकेको छ मजदुरहरुको ज्याला, त्यो १९ हजार जति छ । हामी के घोषणा गर्छौं भने आज चिया मजदुरले जति पाइराख्या छन्, त्यसको एक सय प्रतिशत बढी पैसा दिन्छौं ।’
कार्कीले अगाडि भने- ‘संसदबाट नियम बनाएर ८ हजार रुपैयाँ, ९ हजार रुपैयाँमा मजदुर लगाउन पाइँदैन भनेर नियम बनाउँछौं ।’
चिया बगानका मजदुरहरुको अहिलेको तलब ८-९ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको भन्दै उनले भने, ‘एकबिघा चियापत्ती टिप्नैपर्ने जसरी भए पनि, ज्वरो आयो भन्न पनि नपाइने, खुट्टा दुखेको छ पनि भन्न नपाइने, सुत्केरी भन्न पनि नपाइने । सुत्केरी भएर गएन भने पैसा दिँदैनन् ।’
चिया बगानका मजदुरको पक्षमा बोल्दै कार्कीले भने- ‘प्राइभेट चिया बगानले पनि सरकारले जस्तो ज्याला दिनुपर्छ । हामी मजदुरहरुको ज्याला डबल गर्छौं ।’
कार्कीले नेपालमा चियाको लिलामी सेन्टर झापा क्षेत्रनम्बर १ मै स्थापना गर्ने, वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, किसानलाई पेन्सन दिने र झापाका सबै ग्राभेल सडक पीच गर्ने घोषणा समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी
Posted by फ्यामोस नेपाल - December 19, 2017 0
काठमाडौं । निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र भागवण्डा मिलाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरु सरकार गठन…
कैलाली ५ मा कांग्रेस, वाम र विवेकशील साझाको भीडन्त, को बलियो ?
Posted by फ्यामोस नेपाल - November 20, 2017 0
कैलाली, मंसिर ४ । सात नं प्रदेशको महत्वपूर्ण मानिएको कैलालीको ५ नं निर्वाचन क्षेत्रमा यस पटकको चुनावमा कसले बाजी मार्ला…
कालो धनले बनायो मुख्यमन्त्री
Posted by फ्यामोस नेपाल - February 19, 2018 0
काठमाडौँ, ७ फागुन । सरकार बनाउन र ढाल्न सांसद खरिदबिक्रीको सुरुवात २०५२ मा शेरबहादुर देउवाले सुरु गरेका थिए । २०५१…
बाम होईन, आम गठबन्धनले बन्छ देश : कांग्रेस युवा नेता विश्वप्रकाश
Posted by फ्यामोस नेपाल - November 23, 2017 0
झापा । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् झापा क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्माले चुनावका…
एमाले–माओवादी एकता प्रयास सिद्धान्त, नेतृत्व र नाम परिवर्तन हुँदै
Posted by फ्यामोस नेपाल - January 2, 2018 0
काठमाडौं– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया चलिरहँदा नाम, नेतृत्व, सिद्धान्त, सांगठनिक संरचना परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ ।…
प्रबिधिमय घाचोकको महायज्ञ ।
घाचोकमा ‘विराट शैक्षिक श्रीमद्भागवत धनधान्याञ्चल महायज्ञ’ शुरु
घाचोकमा हुने धनधान्यान्चल महायज्ञको तयारी अन्तिम चरणमा
आउला त दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ?